HOCD ဆိုတာဘာလဲ။ - OCD Today မှ - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
HOCD ဟူသည်အဘယ်နည်း (လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောရောဂါ)? - ယနေ့ OCD ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
ဒီမှာမူရင်းဆောင်းပါးပါ OCD ယနေ့တွင်: HOCD ဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦးကလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးစာဖတ်သူကိုမေးခွန်းကိုပြန်ဖြေတယ်: ငါ OCD, HOCD, ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်, စိုးရိမ်ပူပန်ဖူးသလား?
ထို့အပြင်ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေး obsessive compulsive Disorder အဖြစ်လူသိများ HOCD သူတို့တစ်နည်းနည်းနဲ့တူညီသောလိင်ဆွဲဆောင်စေခြင်းငှါမလိုချင်တဲ့အတှေးတစ်ကြောက်ရသောအခါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိကြောင်း OCD တစ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတှေးအချေါရှိသည်သောလူများသည်မကြာခဏသူတို့ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးဒါမှမဟုတ်သူတို့အချို့သောမျိုးလီယံရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းခံစားမိကြသည်ခံစားရတယ်။
ဒီခံစားချက်တွေကိုလိင်တူချင်းချစ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်လို့ရတယ်။ များသောအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်သူတို့၏စိတ်တွင်“ ငါကသူ့ကိုကြည့်ရတာမကောင်းဘူး” သို့မဟုတ်“ သူကအရမ်းတော်တဲ့သူ” လိုအတွေးများရှိလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်ထိုသူသည်လိင်တူချစ်သူဟုတ်မဟုတ်ကိုတွေးမိသောကြောင့်၊ တူညီသောလိင်သူတစ် ဦး သည်ကြည့်ကောင်းသည်။ သို့သော်ဤအရာသည်လိင်တူဆက်ဆံသူတစ် ဦး နှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။
လူတစ် ဦး ၌ HOCD ရှိပါကထိုသူသည်မလုံခြုံသော၊ မှားယွင်းသောအတွေးများကိုခံစားနေရသည်။ လူတစ်ယောက်ဟာတစ်ခုခုတော့မမှန်သလိုဒါမှမဟုတ်အခြေအနေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ခံစားရလေ့ရှိတယ်။ ထိုအတွေးများနှင့်ခံစားချက်များသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နာကျင်မှုကိုမကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအတွေးများသည်မကြာခဏဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးသူတို့၏စိတ်ကိုတိုက်ခိုက်နေသောကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
အတွင်းစိတ်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကသင်ပုံမှန်မလုပ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်သင့်အားစည်းရုံးရန်ကြိုးစားနေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဥပမာကောင်းတစ်ခုသည်သင်၏စိတ်ထဲတွင်သင့်အားတံတားပေါ်မှခုန်ချရန်သင့်အားပြောလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်ပုံမှန်စဉ်းစားလေ့ရှိသည့်ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာအတွေးမဟုတ်ဘဲသေချာပေါက်သင်မလုပ်နိုင်သည်ကိုသင်သေချာသိရန်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ HOCD သည်လိင်တူမေထုန်ပြုရန်သင်ကြံစည်သောအခါအတူတူပါပဲ ၎င်းသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စေသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ကိုရှုပ်ထွေးစေပြီး OCD အမျိုးအစားများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုအတွေးများသည်အမြဲတမ်းဖြစ်လာပြီးသင်အတွေးများကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အခါ၎င်းသည်ရောဂါဖြစ်လာသည်။ ဤအတွေးများရှိခြင်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်မကြာခဏသူတို့၏စိတ်ထဲတွင်တစ်ခုခုနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်၎င်းသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်စိတ်ပျံ့လွင့်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံ HOCD သို့မဟုတ်သင် HOCD မှတဆင့်သွားကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်ကနေအခမဲ့ဖွစျလိမျ့မညျနှငျ့သငျပိုကောင်းသငျ့စိတျကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်သို့မှသာသင်သည်ဤလက်တွေ့အတှေးအကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုလာမယ့်ခြေလှမ်းတွေကိုသိလျှင်။
ရှာအကူအညီနဲ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုမှာ HOCD / OCD မမှန်ရှိသည်လူတွေကိုကူညီဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထံမှအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာသင့်ရဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နည်းလမ်းများ, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်မိမိကိုယ်မိမိလေးစားမှုအားဖြင့်သင်တို့ပြောဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးက Psychotherapist သင်ကူညီနှငျ့သငျကုသမှုပေးနိုင်မည်မယ်လို့ဆရာဝန်အမျိုးအစား၏နာမတော်သည်။ စကားမစပ်ကြောင့်အလွန်အမင်းမဆိုတတ်နိုင်သမျှအများအပြားမှာသဘာဝမဟုတ်တဲ့ဆေးနည်းလမ်းများနှင့်အတူလိုက်သင့်တယ်ဒါပေမယ့်ဒီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးဆှေးနှေးခဲ့ကြောင်းအကြံပြုသည်။
အခုတော့တစ်ဦး Psychotherapist ပူဇော်ဖို့ရှိကြောင်းအကူအညီအမျိုးအစားကိုသူတို့ကတဆင့်သွားကြသည်သောကြောက်မက်ဘွယ်သောအခွအေန၏ကြိုးကွောငျးကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ HOCD ရောဂါနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုကူညီပေးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦး Psychotherapist တစ်ခု HOCD ရောဂါနှင့်အတူရုန်းကန်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကကူညီနိုင်ရန်အတွက်ယူမယ်လို့ခြေလှမ်းများ၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
၁) အတွေးများကိုရပ်တန့်ခြင်း - ရောဂါဖြစ်ပွားသည့်အခါတိုင်းအသုံးပြုသောအာရုံတစ်ခု။ “ Stop” ဆိုသည့်စကားလုံးကိုပြောပြီးသင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တွင်ဝတ်ဆင်ထားသည့်ရော်ဘာကြိုးတစ်ချောင်းကိုဆွဲယူလိုက်ပါ။
၂) အလုပ်များနေခြင်း - အိမ်မှာတစ်ခုခုလုပ်ခြင်း၊ အပြင်မှာပါ ၀ င်ခြင်း၊ အားကစား၊ အလုပ်များနေခြင်း၊ တစ်ခုခုလုပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုသင်စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့အတွေးများကိုစဉ်းစားရန်အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း။
စိုးရိမ်စိတ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့အသက်ပြင်းပြင်းရှူအတွက် habit- ယူရ၏ 3) ပြောင်းပြန်။
၄။ Exposure Response Prevention (ERP) - လူသည်အတွေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအခြေအနေနှင့်ထိတွေ့သော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုမှတားဆီးနိုင်သည်။
ဒီရောဂါခံစားနေရပြီးသူတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲကိုယ့်ကိုမကြာခဏအဖြစ်မှန်အတွက်လှည့်စားနိုင်မမှန်သောအကြံအစည်ဖြစ်ကြောင်းအဓိကမလုံခြုံမှုရှိခြင်းလိင်တူဆက်ဆံသူမဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းပြီ, ငါအပြုအမူဒီလိုမျိုးအရမ်းနှောက်ဖြစ်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရောဂါဒီလိုမျိုးခံစားနေရပြီးအခါ, တစ်ခုခုကို၏ခံစားချက်မှားနိုငျနှင့်တစ်ခုခုကောင်းစွာအတွက် fit ပါဘူး, ဆိုတဲ့အတွေးမှကြွလာနှင့်လီယံဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါခံစားချက်မကြာခဏအောက်ပါအချက်များကိုနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်စေလျက်ရှိသည်:
• Paranoia တို့ကိုသုံးဖို့
ဤတွင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဟာရောဂါကုသပေးဖို့ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်သူတို့အားအရှင်ဘဝတစ် strain အခမဲ့ဘဝရာတွင်ကူညီပေးသည်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောအခြေခံအလေ့အကျင့်ရှိပါတယ်။ ဤတွင် HOCD ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ရန်ပွဲကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့အချို့အနည်းငယ်အခြေခံသူများဖြစ်ကြ၏။
•အတွေးရပ်ဆိုင်းလိုက် - ကောင်းပြီ, ရောဂါဒီလိုမျိုး၌သင်တို့ကိုရိုက်နှက်နိုငျသောအဓိကအရာအတွေးကိုယ်နှိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်၌ထငျရှားဖြစ်ခြင်းအခြေခံအတှေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်လျှင်ကျနော်တို့ကလုံးဝနီးပါးသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းကိုရပ်တန့်အောင်အားဖြင့်ဒီရောဂါကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကူညီနိုင်သည်။ သင်သည်အဘယ်သို့ကစကားလုံးက "Stop" နှင့်အစားအတွေးကိုယ်တိုင်ကစဉ်းစား, အဲဒါကို၌သင်တို့၏အာရုံစုန်းဖို့အသေးစားနာကျင်မှုစီရင်ရန်သင့်လက်ကောက်ဝတ်တစ်ဦးရော်ဘာတီးဝိုင်းဖမ်းယူလို့ပြောလုပ်နိုင်ပါတယ်။
•အလုပ်များနခွေ - ဒါဟာရောဂါကိုယ်နှိုက်ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပယ်ရှင်းဆွဲဆောင်ဖို့အခြို့သောလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အာရုံစိုက်ထားရန်အရေးကြီးပါသည်။ အဲဒါကို ', သင်တစ်ခုခုလုပ်ကြောင်းတော်တော်များများကအရေးကြီးတယ်စင်ကြယ်သောအမျိုးကဲ့သို့, အခြို့အားကစား play အချို့ဗီဒီယိုဂိမ်းကစား, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူထွက်တစ်စုံတစ်ခုရေးရန်သို့မဟုတ်သင်လုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည်နှင့်ကြောင့်တို့၏အကြံအစည်အနိုင်ရနိုင်အောင်ပဲအလုပ်များကိုယ့်ကိုကိုယ်စောင့်ရှောက် t ကိုလာနှင့်သင့်စိတ်ကိုကျူးကျော်သွားပါ။ အလုပ်များဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်ရှုပ်နေသငျ့စိတျစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သင်တို့ကွာအကြံအစည်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးပါမည်။
•ကျင့်၏ပြောင်းပြန် - ကောင်းပြီ, ရောဂါဒီလိုမျိုးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်သင့်ရဲ့အနည်းဆုံးအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ပါသည်, ကပိုကောင်းသွားစိုးရိမ်ပူပန်မှုကနေစောင့်ရှောက်ခြင်းပေါ်တွင်သင်၏စိတ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်, ယခုအဆိုပါရောဂါ၏အတွေးများကိုအကြောင်းအများကြီးမှစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်သင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည် နောက်ထပ်စိုးရိမ်ပူပန်တိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်ရန်အချို့နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူအတွက်ယူ, သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုအုပျစိုးနှငျ့သငျနောက်ထပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတားဆီးဖို့အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ပေးဖို့ဘယ်လိုပေါ်အချို့သောကောင်းသောအချက်များကိုပေးနိုငျသညျ့တစ်ဦးအနားယူပြည်နယ်ကတည်ငြိမ်အောင်ဘယ်လိုသိသင့်ပါတယ်။
• ERP သို့မဟုတ် Exposure တုံ့ပြန်မှုကာကွယ်ခြင်း - အခြေခံအားဖြင့်ဒီရောဂါခံစားနေရပြီးသူအလေ့အကျင့်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းသောအခွအေနေမှပြသနေသည်။ သို့သော်ဤအတူကရောဂါပုံမှန်အားတိုက်ခိုက်ရန်လမျး၌ရောက်ရှိထံမှသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ အခြေခံအတွေး ERP နှင့်အတူသင်ဖရိုဖရဲကိုယ်တိုင်ကမှထပ်မံထိတွေ့မှုများနှင့်တုန့်ပြန်သောအားဖြင့်တိုက်ခိုက်တားဆီးနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ငါကလည်းလိုပဲ, ဒီရောဂါသက်သက်သာနှောက်သည်နှင့်တစ်ခုသာလမ်းထဲမှာထိန်းချုပ်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်ပေါ်ကစား, သင်ပြီးသားရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါဒုက္ခလျော့ပါးနိုင်ပါတယ်။
တကယ်ရောဂါဒီလိုမျိုးကုသပေးဖို့ထို့အပွငျ, သင်တို့ကိုအခြေခံအားဖြင့်သွားနှင့်အမှန်တကယ်သငျသညျအခွအေနသူ့ဟာသူထရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပေးမည့် psychotherapist တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကကွာ, ဤတိုက်ခိုက်မှုမှသင်၏စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိခြင်းအမှန်တကယ်နောက်ထပ်လက်မှာအခြေအနေကကိုင်တွယ်၌သင်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ HOCD ကရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြောင်းနှင့်အတူကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီဖွငျ့ curable သည်နှင့်သင်အပြည့်အဝကိုယ့်ကိုကိုယ်ကအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်လျှင်ဖွယ်ရှိသွားလိမ့်မယ်တဲ့ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး